Mpanamboatra sy mpamatsy pendant ara-pahasalamana - Orinasa mpitsabo pendry any Sina
Ny vokatra voalohany an'ny orinasanay dia latabatra fandidiana mekanika multifunctional TS, latabatra fandidiana herinaratra andiana TD, andian-tariby fitaratra DD, jiro miasa feno fandinihana, jiro miasa andiany LED, mekanika sy herinaratra, latabatra fandidiana maro samihafa, fandriana gynéological ary fandriana fandinihana , pendant fitsaboana, tetezana fampiatoana vonjy taitra ICU sy fitaovana fitsaboana hafa.
TS-D-100 pendantà elektrika fitsaboana roa ho an'ny O ...
TS-DQ-100 Endoscopic Medical P ...
QF-JX-300 China ICU Medical Separate Bridge Pendant ...
TD-TS-100 Factory Direct Supply Fitsaboana Mitambatra P ...
TD-TS-100 Factory Direct Supply Medical Pendant mitambatra ho an'ny Hopitaly
TD-TS-100 dia manondro pendant medika mitambatra. Izy io dia fitaovana fanampiny feno manampy amin'ny fikarakarana be loatra ao amin'ny efitrano fandidiana, efitrano fitsaboana ary ICU.
Fantsona Gas-Medical Double TS-D-100 ho an'ny efitrano fandidiana
TS-D-100 dia manondro pendant vita amin'ny gazy fitsaboana herinaratra.
Ny fampiakarana ny pendant dia entin'ny herinaratra, izay haingana kokoa, azo antoka ary azo itokisana kokoa.
Miaraka amin'ny efitrano mihodina roa, lehibe kokoa ny elanelan'ny hetsika. Hanana fidirana tsara kokoa amin'ilay marary izy io.
Ny halavan'ny sandry mihodina sy ny fantsom-panafody, ny faladiany elektrika dia namboarina azo alaina.
Manampia entona fandoavana entona sy gazy oksida azota, izay azo havaozina ho pendant ara-pitsaboana fanatoranana.
TS-DQ-100 pendant endoskopika medika elektrika roa avy amin'ny orinasa
TS-DQ-100 dia manondro pendant endoskopika elektrika misy sandry roa. Izy io dia fitaovana ilaina amin'ny fandidiana laparoskopika. Herinaratra no mitondra azy, tena mety sy haingana kokoa. Tsy vitan'ny mampita herinaratra sy gazy, fa mametraka fitaovana fitsaboana ihany koa. 100% namboarina ny habeny, ny toeram-pivarotana entona fitsaboana ary ny faladiany herinaratra. Famolavolana modular, azo havaozina amin'ny ho avy izy io.
QF-JX-300 China ICU pendant Bridge misaraka amin'ny Bridge ho an'ny hopitaly
QF-JX-300 dia manondro pendant tetezana ara-pitsaboana ICU, izay fitaovana fanampiana famonjena famonjena ilaina amin'ny paroasy ICU maoderina, izay misy andian-tetezana, faritra maina ary faritra lena.
ZD-100 ICU nampiasa pendant medaly medaly ho an'ny hopitaly
ZD-100 dia manondro pendant amin'ny tsanganana ara-pahasalamana, izay karazana fitaovam-panampiana mpamonjy voina natao ho an'ny paroasy sy efitrano fandidiana ICU. Izy io dia miavaka amin'ny firafitra kely, toerana kely ary fiasa feno.
Fantsona endoskopika fandidiana endoskopika TS-Q-100 Double Arm Mechnical
TS-Q-100, dia ilazana pendant fitsaboana endoskopika mekanika sandry roa. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana fandidiana ilaina amin'ny fandidiana laparoskopika maoderina. Tsy ny fitaovana fitsaboana ihany no azo apetraka, fa ny herinaratra sy ny lasantsy azo omena koa. Sandry mihodina roa, ny halavan'ny sandry dia azo namboarina ary azo ahodina 350 degre, manome toerana malalaka ho an'ny hetsika.
Pendant ny fiasan'ny mekanika TS-100 Double Arm any Shina
TS-100, ity modely ity dia manondro pendant fandidiana mekanika roa.
Ny famolavolana tànana avo roa heny dia mampitombo ny habaka fampidiran-drongony.
Ny halavan'ny sandry mihodina dia azo namboarina.
Na ny vatan'ny boaty na ny vatan'ny sandry dia afaka miodina ao anatin'ny 350 degre.
TD-Q-100 Tanan-tànana Endoscopic Medical Manual ho an'ny hopitaly
TD-Q-100 dia manondro pendant medikaly endoscopic mekanika tokana.
Miaraka amin'ny firafitra kely sy ny toetra tsy dia misy habaka, dia toeram-piasana mpitsabo mpanampy sahaza ho an'ny hopitaly kely sy tobim-pitsaboana matevina voafetran'ny faritry ny paroasy.
Izy io dia afaka manome serivisy fandefasana herinaratra, fandefasana entona ary serivisy fandefasana data, ary hametrahana fitaovana fitsaboana.
TD-100 pendant valiha mekanika tokana-tanana ho an'ny hopitaly
TD-100, ity modely ity dia manondro pendant medikaly fandidiana mekanika tokana.
Ny fikirakirana mahazatra ho an'ny toeram-pivarotana entona dia 2x O2, 2x VAC, lx AIR.
TD-Q-100 Pendant Endoskopika fandidiana herinaratra tokana ho an'ny teatra fiasa
TD-DQ-100 dia manondro pendant endoskopika fandidiana herinaratra amin'ny sandry tokana. Ity pendant endoskopika ity dia afaka miakatra sy midina amin'ny alàlan'ny rafitra mandeha amin'ny herinaratra. Ampiasaina be ao amin'ny efitrano fandidiana, efitrano fitsaboana, ICU ary efitrano fanarenana. Nampiasaina indrindra izy io mba hanomezana fampitana herinaratra, fandefasana entona ary serivisy fandefasana data, ary hametrahana fitaovam-pitsaboana.
TD-D-100 Pendant Gas fandidiana elektrika tokana misy mari-pahaizana CE
TD-D-100 dia manondro pendant entona fandidiana herinaratra tokana.
Ampiasaina be amin'ny efitrano fandidiana sy ICU izy io. Ny fampiakarana ny pendant dia entin'ny motera iray, izay tsy haingana sy mahomby ihany, fa azo antoka sy azo antoka kokoa.
Izy io dia noforonina ho an'ny serivisy elektrika, data ary angovo ilaina rehetra.